Global Voices teny Malagasy » Ry Andriambavilanitra, Afaka Manao ny Silipon-dehilahy ho Lasa Atao Fitafiam-Behivavy Ianao ho Fitsitsiana. Jereo Ity Fandaharana Amin’ny Fahitalavitra Ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Oktobra 2015 20:22 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Hehy, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Akon'ny RuNet
Sehatra avy amin'ny Fiainana ara-pahasalamana, mampiseho an'i Elena Malysheva. Pikantsary: YouTube.
Nitontongana tao anatin'ny fotoan-tsarotra ny toekarena Rosiana. Mora vidy ny solitany, notapahan'ny Tandrefana ny fidiran'ny vola vahiny sy ny fanafarana teknolojia avo lenta, nandaniana volabe (iza no mahalala hoe ohatrinona) ny firotsahan'ny miaramilan'i Moskoa ao Okraina ary ao Syria ankehitriny, ary amporisihana ny vehivavy mba hanao ny silipon-dehilahy ho akanjo ambony. Inona ity zavatra farany ity, hoy ianao manontany? Eny, namoaka andiany iray ny fandaharana iray ao amin'ny tambajotra fahitalavitra Rosiana iray tamin'ny fiandohan'ity volana ity ary manazava ny fomba ahafahan'ny vehivavy Rosiana mitsitsy vola amin'ny alalan'ny fanovana ny atin'akanjon'ny lehilahy ho tantinonon'ny mpilatro.
Antsoina hoe Zhit’ Zdorovo (“Fiainana Ara-pahasalamana”) ny fandaharana izay manasongadina an'i Elena Malysheva, mpitsabo/mpampianatra/dokotera/profesora mampianatra ireo mpijery ny fomba fiaina ara-pahasalamana sy maharitra kokoa. Alefa ao amin'ny Pervyi Kanal (Fantsona 1), fahitalavi-panjakana goavana indrindra ao Rosia ny fandaharana.
Ny fandaharana momba ny fanovana silipon-dehilahy ho akanjo ambonim-behivavy no fandaharana voalohany tamin'ny fiandohan'ny sehatra vaovao antsoina hoe “Ho tafavoaka Amin'ireo Korontana ireo Isika! ” izay anomezan'i Malysheva toro-hevitra ho an'ny mpijery ny fomba ahazoana fitaovana fanampiny bebe kokoa ao an-tokantrano. Tamin'ny tapaatpam-pandaharana amin'ity andiam-pandaharana ity no nampisehoany tamin'ny mpijery ny “fanomezana aina vaovao indray ny kitapon'ankizy” sy ny fomba tsy maha-tatera-drano ny kiraro tenisy.
“Ity ny valinteninay ho an'ny fijalian'ny mpiray tanindrazana’ noho ny fiovaovan'ny vidin-javatra, ny krizy, ny vola robla, sy ny sisa,” hoy i Malysheva niravaka akanjo sy kiraro miloko volomboasary tamin'ny mpijery. Taty aoriandriana tao amin'ny fandaharana, raha nitazona silipon-dehilahy roa teny an-tanany izy, dia mazava ho azy fa mitafy Apple Watch Sport (Famantaranandro Fanatanjahantena Apple), izay amidy ao Rosia amin'ny vidiny mora indrindra 23,990 roubla (388 dolara) izy. Tsy mazava raha nanoro hevitrany solon-tsilipo ho famantaranandro raitra i Malysheva.
Ao amin'ny andiam-pandaharana, mandray hety eo amin'ny fitazonana azy anankiroa i Malysheva sy ny ekipany ary manondro tovovavy tao anatin'ny mpijery. Mihomehy eo amin'ny sehatra izy, satria nilaza i Malysheva fa azo atao akanjo filomanosana tsara ihany koa ny akanjo.
Tao amin'ny YouTube, nahasarika mpijery maherin'ny 46 000 ny sombin'ny fandaharan'i Malysheva mampiseho ny fampianarany ny vehivavy miresaka silipon-dehilahy, ary nahazo tiako 76 sy tsy tiako 220.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/20/75601/
 Ho tafavoaka Amin'ireo Korontana ireo Isika!: http://www.1tv.ru/prj/zdorovo/vypusk/40870